Free Download Windows 10 DVD sameeyey, Guba DVD, samee Muqaal
> Resource > DVD > Windows 10 DVD sameeyey, Si fudud Samee Muqaal, Guba DVD ee Windows 10
Ka dib markii lagu casriyeeyo habka ay u Windows 10, waxaad ka heli doontaa in ay tahay in ay gubaan DVD filimada la adiga kuu gaar ah videos awoodin sidii ay u noqon on Window 7. isticmaalo Sababtu waxa weeye Microsoft saaro DVD Kan sameeyey ka Windows 10. Tani waa run ahaantii niyad, samaynta shaqadaada dhexdeeda Wabiyaalkii yar hufan. Raadinta DVD gaare Windows ah in Windows 10, aad xaq u weyn yihiin! Waxaan dhahnaa heli wanaagsan ee Windows 10 DVD gaare ah, taas oo kuu ogolaanaysaa inaad si fudud loo abuuro DVD oo waxaad ka samaysaa slideshow qurux badan in Windows 10.
Wondershare DVD Kan sameeyey waa ay haatan ugu fiican Windows 10 DVD gaare. Iyadoo software, waxaad gubi karaa video in Windows 10 ka dhowaad qaab video kasta, sida AVI, MKV, MP4, M4V, 3GP, MOV, iyo iwm sokow, waxaad samayn kartaa si qurux badan loogu tala galay DVD slideshow music iyo saamaynta. Sidoo kale, Tifaftiraha dhisay-in kuu ogolaanayaa inaad shakhsiyeeyo videos iyo sawiro hortiisa ka ololaya. Waxaa gabi ahaanba waa codsi weyn loogu abuuro DVDs in Windows 10.
Sidee si ay u gubaan DVD la Tani Windows 10 DVD Kan sameeyey,
Wondershare DVD kii iyaga uumay ha kartaa in aad ku gubi DVD ee Windows 10 ka hor sida aad u samayn jiray Windows DVD Kan sameeyey on Windows 7. Fadlan akhri tutorial kooban ee hoos ku.
1 dejinta aad video ama sawir
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo degsado software-ka, riix batoonka "Guba" ka dibna si fudud u jiidi oo hoos u faylasha aad galay tan Windows 10 DVD abuuray. Ama waxaad riixi kartaa ah "Import" button on dhexe ee interface ka. Si aad ku dari files badan codsiga, fadlan uun raaci doonaa habraaca la mid ah.
2 ayeey Video arrintan Windows 10 DVD Kan sameeyey (Ikhtiyaar)
Fadlan riix edit icon this (sida qalin a) aad video on inay arbushin ilaa suuqa kala video tafatir ah. Waxaad noola oo isku shaandheyn, kor loogu qaado, jar aad video iyo dar watermark ama Cinwaan in video ah. Just guji icon kasta (In kor loo qaado, goo, Watermark, Cinwaan) in la shakhsiyeeyo aad video.
3 Customize DVD menu Template
Guji "Change Template" tab xaqa ka interface ka. Waxaad dooran kartaa Template aad ka doorbido ee Windows 10 DVD Kan sameeyey . Waxa kale oo aad ku dari kartaa soo jeeda ama ku darto qoraalka ah ee DVD aad.
4 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo gubi DVD aad ee Windows 10
Ka dib markii personalizing DVD aad, fadlan riix "Kulanka Xiisaha Leh" icon in ay ku eegaan. Haddii aad raalli shaqadaada tahay, kaliya ka hor tagaan. Riix ah "Guba" icon si ay u bilaabaan si ay u gubaan. Ka hor inta in, fadlan dhigay in uu gubtay in disk DVD ama file ISO ah. Markaas waxaad daawan kartaa DVD aad on TV saaxiibadaa hadda!